Maxaa hortaagan in cadaaladda la horgeeyo dadkii ka dambeeyay dilkii dhaqaatiirta ee deegaanka Gololeey? | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Maxaa hortaagan in cadaaladda la horgeeyo dadkii ka dambeeyay dilkii dhaqaatiirta ee...
Maxaa hortaagan in cadaaladda la horgeeyo dadkii ka dambeeyay dilkii dhaqaatiirta ee deegaanka Gololeey?
Dhacdadaan ayaa lagu dilay 6-Dhaqaatiir iyo qof farmashiye ka shaqeynayay, falkaan oo dhacay 27-kii May 2020, kadib markii 1:30 P.M. ay afduubatay koox wajiga daboobatay oo ka koobneed shan ruux sida ay wariyeen dadka deegaanka.
Xarunta Caafimaadka ee Gololeey oo ay gacansiiso Hay’adda Zamzam Foundation ayay ka shaqeynayeen dhaqaatiirta dil wadareedka loo geystay ee maydkooda la helay maalin kadib afduubkooda oo ah 28-ka May 2020.
Dowladda Federaalka ayaa guddi u xilsaartay dhacdadaas, Cambaareynta DG Hir-Shabeelle, Mareykanka iyo dhinacyada kala duwan ee falkaas ka falceliyay wax dhaafsiisan ma jiraan lex bilood kadib sida ay sheegtay Hay’adda Xuquuqda Aadanaha ee Human Right Watch.
Dhamaadkii May 2020, guddi loo xilsaaray xog uruurinta dil wadareedka loo geystay dhaqaatiirka Gololey ayaa tagay degmada Balcad, waxa ay la kulmeen ehelka dadkaas oo ay ka qoreen macluumadkii ugu dambeeyay kahor inta aan la afduuban iyo haddii ay jiraan waxyaabo ay u sheegeen oo kusoo kordhay sida hanjabaad, digniin iyo IWM.
Haddaba, Maxaa hortaagan in Cadaaladda la horgeeyo dadkii ka dambeeyay Dil-wadareedka loo geystay Dhaqaatiirta lagu dilay Deegaanka Gololeey?